Xiaomi Mi5 अक्टोबर १ presented मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ Androidsis
शाओमीले आगामी अक्टुबर १ 19, शाओमी एमआई for को लागि कार्यक्रम तयार गर्छ?
शाओमी बर्षका निर्माताहरु मध्ये एक बन्न गएको छ यसको कारण यो चिनियाँ निर्माताले यस वर्ष अहिलेसम्म चाखलाग्दो उपकरणहरूको श्रृ launched्खला सुरू गरिसकेका छन्, जस्तै Xiaomi Mi4c वा Xiaomi Redmi नोट २। साथै, कम्पनीले चीन र विदेशमा धेरै स्मार्टफोन बेच्न प्रबन्ध गरिरहेको छ।तपाईंलाई धन्यवाद वितरण स्टोर।
तर हामीले देख्न चाहने उपकरण भनेको कम्पनीको अर्को फ्ल्यागशिप, शाओमी मी5हो। यो टर्मिनल भएको छ धेरै अफवाह यस बर्ष भर र हामीसँग पहिले नै यसको प्रस्तुत मिति हुन सक्छ, जुन अर्को अक्टुबर १ be हो।
शाओमीले यसको आधिकारिक Weibo खाता, चिनियाँ सामाजिक नेटवर्कमा टीज़र छवि प्रकाशित गरेको छ। यस छविमा, उनले प्रेसलाई कम्पनीको कार्यक्रममा बोलाउँदछन्, जुन कुराले संकेत गर्दछ कि शियोमी एम around को आगमन कुनाको वरिपरि हुनेछ। चिनियाँ निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको छविमा फर्कदै हामी अक्टुबर १ of को मिति र चिनियाँ अक्षरहरू अन्तर्गत र हाम्रो भाषामा अनुवादित पढ्न सक्छौं, हामी »नयाँ जेनेरेसन read पढ्छौं।
अक्टुबर १,, शाओमी मी of को प्रस्तुतीकरण?
अफवाहहरु यो उपकरण बर्ष को अन्त्य हुनु अघि र नयाँ छवि को प्रकाशन संग जारी गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दियो, सबै कुरा यो संकेत गर्दछ जस्तो देखिन्छ। हामी हेर्नेछौं कि त्यो दिन, अक्टुबर १ X, शाओमीले अन्य चाखलाग्दो उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन पछिल्लो पहिलो स्मार्टवाचको रूपमा धेरै अफवाह गरिएको छ।
चुहावट स्पेसिफिकेसन अनुसार, एमआईaए संग सुसज्जित हुनेछ १.5,2..XNUMX इन्च स्क्रीन 1920 x 1080 पिक्सलको रिजोलुसनको साथ। भित्र हामी हेर्दछौं कि कसरी प्रोसेसर पूरा उपकरण चलाउने चार्ज मा हुनेछ Snapdragon 820 ( यद्यपि यो अफवाहहरु छन् कि यो हेलीओ एक्स २० हुनेछ) र यस सोसाइटीको साथ GB जीबी र्याम मेमोरीको साथ आउँछ। यसको आन्तरिक भण्डारणको बारेमा, त्यहाँ बिभिन्न विकल्पहरू हुनेछन्, यद्यपि उनीहरूको बारेमा धेरै जानकारी लीक गरिएको छैन, तर यो आशा गरिन्छ कि हामीसँग GB२ जीबी र GB 20 जीबी संस्करण हुनेछ। अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये हामी यो देख्छौं कि यसको मुख्य क्यामेरा र फोनको पछाडि अवस्थित छ, कस्तो हुनेछ Me मेगापिक्सल, जबकि, फ्रन्ट क्यामेरा MP MP का हुनेछ। उपकरण Xiaomi को प्रसिद्ध MIUI 8 अनुकूलन तह अन्तर्गत Android Android.१.१ Lollipop अन्तर्गत चल्नेछ।
हामीले केवल शाओमी स्टार टर्मिनल पछाडि के छ भनेर पत्ता लगाउन केहि दिन कुर्नु पर्छ। टर्मिनल उपभोक्ताहरू द्वारा अत्यधिक अनुमान गरिएको किनकि यो उनीहरूको अर्को स्मार्टफोन हुन सक्छ। र तपाइँलाई, तपाई सियोमी एमआई What को बारे सोच्नुहुन्छ ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » शाओमीले आगामी अक्टुबर १ 19, शाओमी एमआई for को लागि कार्यक्रम तयार गर्छ?
नेक्सस P पी वा आईफोन6मा कसले कम कम प्रकाशको फोटोहरू लिन्छन्?
Waze विभिन्न इन्फोग्राफिक्स मा शो जो सबै भन्दा राम्रो र खराब ड्राइभमा तिनीहरू देश ड्राइभ छन्